Josoa sy Ireo Gibeonita | Tantara ao Amin’ny Baiboly
LESONA 6 Olona Valo Sisa no Velona!
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Kabiyè Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rutoro Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tiorka Tiv Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Josoa sy Ireo Gibeonita
Vetivety dia henon’ny firenena kananita hafa ny zava-nitranga tany Jeriko. Nifanaraka àry ny mpanjaka maromaro fa hiady amin’ny Israelita. Tsy te hanao an’izany anefa ny Gibeonita. Nankany amin’i Josoa ry zareo, ary nanao akanjo efa ratsy be sady rovidrovitra. Dia hoy ry zareo: ‘Avy any an-tany lavitra izahay, ary henonay ny nataon’i Jehovah tamin’i Ejipta sy Moaba. Aza vonoina re izahay fa ataovy mpiasanareo e!’
Nino ny tenin-dry zareo i Josoa ka tsy naninona an-dry zareo. Telo andro taorian’izay anefa, dia fantatr’i Josoa fa hay tsy avy any lavitra akory ny Gibeonita, fa avy ao Kanana ihany. Dia hoy i Josoa: ‘Fa naninona ianareo no nandainga?’ Hoy ry zareo: ‘Ka natahotra izahay. Ianareo tsinona ampian’i Jehovah. Aza vonoina moa izahay e!’ Nitana ny teniny i Josoa ka tsy namono an-dry zareo.
Tsy ela taorian’izay, dia nitady hanafika an’ireo Gibeonita ny mpanjaka kananita dimy sy ny miaramilany. Nandeha tamin’ny alina àry i Josoa sy ny miaramilany mba hanavotra ny Gibeonita. Raikitra ny ady ny ampitso vao maraina. Resy ny Kananita ka nandositra teny rehetra teny, nefa tonga dia nandatsahan’i Jehovah havandra ngezabe. Nangataka tamin’i Jehovah i Josoa avy eo mba hataony tsy mihetsika ny masoandro. Mbola tsy nitranga mihitsy izany taloha. Sahy nangataka an’izany anefa i Josoa satria natoky an’i Jehovah izy. Tsy nihetsika tokoa ny masoandro tamin’iny andro iny, ka resin’ny Israelita daholo ireo mpanjaka kananita dimy sy ny miaramilany.
“Aoka ny teninareo rehefa Eny dia Eny, rehefa Tsia dia Tsia, fa avy amin’ilay ratsy ny ankoatra izany.”—Matio 5:37
Fanontaniana: Inona no nataon’ny Gibeonita mba tsy ho faty ry zareo? Inona no nataon’i Jehovah mba hanampiana ny Israelita?
‘Tsy Nisy Tsy Tanteraka ny Fampanantenany’
Inona no hanampy anao hitovy amin’i Josoa, ka hatoky fa tsy maintsy ho tanteraka izay nampanantenain’Andriamanitra?